समाचार – mero sathi tv
७९ वर्षीया वृद्धाको सामूहिक बलात्कार
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:२५ April 30, 2018
LeaveaComment on ७९ वर्षीया वृद्धाको सामूहिक बलात्कार
१७ वैशाख, काठमाडौं । इलामको रोङ गाउँपालिका-१, शान्तिपुरमा ७९ वर्षीया वृद्धाको सामूहिक बलात्कार भएको छ । उनलाई गएराति ११ बजे अज्ञात व्यक्तिको समूहले बलात्कार गरेको हो । बलात्कारपछि वृद्धाको जिब्रो समेत काटिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलामले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बस्नेतका अनुसार अहिले अनुसन्धानका लागि एक जना प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली शान्तिपुरतर्फ गएको […]
अचार खाँदा शरिरमा पुर्‍याउँछ यस्ता हानि जुन तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:२४ April 30, 2018
LeaveaComment on अचार खाँदा शरिरमा पुर्‍याउँछ यस्ता हानि जुन तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ
नेपालीलाई दाल, भात र तरकारीसँग अलिकति अचार पनि चाहिन्छ नै । अचार स्वादिष्ट हुनाले खाना रुचाउन यसले मद्दत गर्छ । बट्टामा खाँदिएको अचार बजारमा सजिलै पाइन्छ । तर नियमित रूपमा अचार खाँदा यसले स्वास्थ्यमा हानि पु–याउँछ । स्वादिष्ट अचारका साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छन् । जानौं अचारले गर्न सक्ने हानिका बारेमा : मधुमेहका लागि हानिकारक: मधुमेहका रोगीले […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:१८ April 30, 2018
LeaveaComment on यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् ७ दिनमा नै शरिरका मुसा कोठि गाएब गर्नुहोस् (भिडियो)
आफू सुन्दर हुने हरेको मानिसको सहज स्वभाव हो । केही मानिसका छालामा मुसा वा कोठी आएर सुन्दरतामा प्रभाव परेको छ भने अझ विशेष गरी अनुहारमा मुसा वा कोठी आएमा नराम्रो देखिन्छ । मानिसको शरीरमा मुसा किन र के कारणले आउँछ ? मुसालाई अंग्रेजीमा वर्त् भनिन्छ । एजपीभी भन्ने एक किसिमको भाइरसको कारण यो छा लामा मुसा […]
कसले खानु हुँदैन तितेकरेला
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:१३ April 30, 2018
LeaveaComment on कसले खानु हुँदैन तितेकरेला
करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैन : गर्भवती हुनुहुन्छ ? करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत डर हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा करेला खाँदा ध्यान पुर्‍याउन […]
गायिका पुर्णिमा लामा-यस्तो बन्यो नया गीत (हेर्नुहोस)
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:५६ April 30, 2018
LeaveaComment on गायिका पुर्णिमा लामा-यस्तो बन्यो नया गीत (हेर्नुहोस)
नेपाली गीत संगीतमा निक्कै आसलाग्दो र सबैको मन जितेकी सुगम संगीतकी नयाँ गायिका पुर्णिमा लामाले पछील्लो समय निक्कै चर्चा बटुलेकि छिन् उनको स्वर जती सुनेओ उती सुनिरहु जस्तो लाग्ने सुरोलो तरिकाले गाउँने लामाको स्वरलाई धेरै सोर्ता दर्शकले मन पराउनु भयको छ उन्ले लग्भक ३ दर्जन भन्दा बढी गीत गाई सकेकी छिन् जस्मा यो गीत बन्धुक […]
श्रीमती रिसाए के गर्ने? यस्ता छन फकाउने टिप्सहरू
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:२५ April 30, 2018
LeaveaComment on श्रीमती रिसाए के गर्ने? यस्ता छन फकाउने टिप्सहरू
भनाइ नै छ बिनाश काले विपरित बुद्धि…रिसाएको बेलामा केही यस्तै अवस्था हुन्छ । मानिस रिसाएको बेला के सही के गलत सोच्दैन । उ खाली आफ्नो रिस देखाउनमात्र तत्पर रहन्छ । यस अवस्थामा भएका घटनाले पछिसम्म नराम्रो परिणाम दिने गर्छ । अझ यसको असर वैवाहिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच वैचारिक मतभेद हुनु […]
भनेको ठाउँमा जान नमान्दा मनमैजुमा खुँडा हानेर ट्याक्सी चालकको हत्या प्रयास
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:११ April 30, 2018
LeaveaComment on भनेको ठाउँमा जान नमान्दा मनमैजुमा खुँडा हानेर ट्याक्सी चालकको हत्या प्रयास
आफुले भनेको ठाउँमा जान नमानेको भन्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको हत्या प्रयास भएको छ। शुक्रबार राती मनमैजु पुल नजिकै दुई युवकले ट्याक्सी चालक अच्युत कार्कीको हत्या प्रयास गरेका हुन्। घटनामा संलग्न दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बानियाटार बस्ने सुमन खाती र सिन्धुपाल्चोक कटुञ्जे घर भएका पेम्बा तामाङलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले शनिबार पक्राउ गरेको हो। […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:०७ April 30, 2018
LeaveaComment on ट्रायल पास गर्ने अचुक टिप्सः ध्यान दिएर एकपटक पढनुस !
उपत्यकाका सबैजसो यातायात कार्यालयमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ट्रायल दिनेहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ । घण्टौं लाइनमा बसेर ट्रायल परीक्षाका लागि फर्म भरेकाहरु सानो गल्तीका कारण ट्रायलमा फेल हुँदै आएका छन् । स–साना कमजोरीलाई ध्यान दिने हो भने ट्रायल सजिलैसँग पास गर्न सकिन्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु आत्मबल : ट्रायल परीक्षा दिन लागेका परीक्षार्थी डराउनु हुँदैन, […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:०४ April 30, 2018
LeaveaComment on लण्डनमा गाडिको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृत्यु
बेलायतमा बाटो काट्ने क्रममा गाडीको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृत्यु भएको छ ।आइतबार लण्डनको वेस्ट हन्स्लोस्थित आफ्नै निवासनजिकै घरमा पाहुना आउने भएकोले किनमेल गर्न दोकान गएर फर्कन्दै गर्दा बाटो काट्ने क्रममा एक गाडीले ठक्कर दिएपछि ४९ वर्षीया मिना तावाहाङ लिम्बूको ज्यान गएको हो। गाडीको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएकी लिम्बकूो शव अहिले लण्डनस्थित एक अस्पतालमा राखिएको […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:५८ April 30, 2018
LeaveaComment on फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय
फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने एक जनालाई सोमबार इन्डोनेसियामा पाँच वर्ष जेल सजाय दिइएको छ । इस्लाम विरुद्ध फेसबुकमा जथाभावी लेखेको भन्दै ती व्यक्तिलाई पाँच वर्षको जेल सजाय गरिएको इन्डोनेसियाली अधिकारीले जनाएका छन् । इन्डोनेसियामा हालै जारी गरिएको विद्युतीय सूचना सम्न्धीब एउटा कानूनी व्यवस्था विवादमा परिरहेको छ । विवादास्पद कानूनको शिकार ३९ बर्षका अल्नोल्डी बहारी हुनुभएको छ […]